माथिल्लो तामाकोशीको कहाँ पुग्यो काम, बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीमा के हुँदैछ प्रगति ?
काठमाडौं : सरकारले विभिन्न हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै उच्च प्राथामिकतामा राखेर काम गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, सरकारले जति उच्च प्राथामिकतामा राखेर ती आयोजनामा बजेट विनियोजन गरे पनि कामले भने खासै गति लिएको छैन । सरकारले २२ वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यीमध्ये ३ वटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । जसमा माथिल्लो तामाकोशी, पश्चिम सेती जलविद्युत र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । यी आयोजनाको निर्माण सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । यस अवधिमा २०६७–६८ सालमा निर्माण सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना करिब १० वर्षपछि बल्ल सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।
तर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र पश्चिम सेती आयोजनामा अझै विवाद नै कायम रहेको देखिन्छ । यद्दपि, यी आयोजनाहरुको निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हेरौं कुन आयोजनाको निर्माण अवस्था कस्तो छ ?
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत : आयोजनाको ९८.७% भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न
माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा सुरु भएको हो । ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य साथ आयोजना सुरु गर्दा निर्माण लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने त्यतिबेला लक्ष्य लिइएको थियो ।
तर, यस आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा पूरा भएन । अनि लागत अनुमानले पनि पुगेन । यसको मुख्य कारण भूकम्प मानिएको छ । अहिले यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९८.७% भौतिक निर्माण कार्य सकिएको छ ।
पछिल्लो समय ठूला भारवहन भएका उपकरण ढुवानीमा कठिनाईका कारण उपकरण जडानमा समस्या आएको कम्पनीले जनाएको छ । हालसम्म आयोजना निमार्णमा ४४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब आयोजना सम्पन्न हुँदा ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीले सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरिसकेको छ । हाल यस कम्पनीको नेप्सेमा सेयर कारोबारसमेत भइसकेको अवस्था छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : १७ हजार २३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, हालसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ११% मात्रै भएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा निर्माण सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सकिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने भएपछि ५ वर्ष थप गरिएको हो । १२ सय मेगावाटको यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम मात्रै सकिएको छ । आयोजनाका लागि १७ हजार २३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरे वापत १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना : मोडालिटी तयार नहुँदा काम अघि बढेन
पश्चिम सेतीबाट कुल ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको छ । परियोजनाको विकास ढाँचा लगायतका विषयमा सुझाव दिन ३ सदस्यीय समिति गठन भएकोमा यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको छ । आयोजना निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा निश्चित हुन नसकेका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।